आजको न्युज शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६, ०८:५६:००
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १० दिन लामो अस्पताल बसाइपछि बिहीबार बालुवाटार फर्किएका छन् । गत १० गते एपेन्डिसाइटिसको अपरेसन गरेका ओली १० दिनसम्म अस्पतालको आइसियु बेडमा उपचाररत थिए । उपचारमा संलग्न डाक्टरहरुका अनुसार त ओलीले अझै १ हप्ता अस्पतालमै आराम गर्नुपर्ने थियो । तर ओलीको जिद्दीपनका अगाडि डाक्टरहरुको केही सीप चलेन । अन्तत: उनलाई डिस्चार्ज गरियो । तर चिकित्कसीय निगरानीमै रहने गरी । कुनै दौडधूप गर्न छुट दिएका छैनन् उनलाई डाक्टरले ।
हुन त प्रधानमन्त्री ओली हाँसीमजाक गरिरहने व्यक्ति हुन् । उनको हरेक बोलीमा हास्यरस पाइन्छ । सामान्य कुरामा पनि कि त हाँसो गर्छन् कि त व्यंग्य । तर उपचारका लागि अस्पतालको आइसियु बेडमा छँदा ओलीले जुन हाँसिमजाक गरे, यसले भने हरेकलाई सोच्न बाध्य बनाउँछ, हैन यस्तो पीडामा पनि कसरी आउँछ ओलीमा मजाकीपन ?
नम्बर १ :
ओली बेडमा आराम गरिरहेका थिए । वार्डमा भएकी नर्सलाई उनले छेउमा बोलाए । आफ्नो ड्युटी, त्यसमा पनि प्यासेन्ट छन्, प्रधानमन्त्री । केही पो भएछ कि भनेर ती नर्स तुरुन्तै बेडछेउमा आइन् ।
ओलीले उनलाई एउटा खाली कागज र कलम ल्याउन भने । नर्सले सोचेकी थिइन्, ओलीलाई कतै दुख्यो कि अथवा केही गाह्रो भयो । तर त्यसविपरीत कागज र कलम मागेपछि छक्क परिन् । र, सोधिन्, ‘किन र प्रधानमन्त्री ज्यू ? तपाईंको हात दुख्छ, लेख्न पनि मिल्दैन ।’
ओलीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले भनेपछि लिएर आउनुस् न, काम छ ।’ फेरि सोधिन्– काम भन्नुस् अनि ल्याउँछु भनेर ।
अनि ओलीले भने, ‘खाली कागजमा सही गरेर छोडिदिन्छु । तपाईंलाई जे चाहिन्छ त्यो लेखेर लिनुहोला । तर मलाई यो तन्द्र्याङतुन्द्रुङ (उपचारका लागि शरीरमा जोडिएका पाइप र तार) बाट हटाइदिनुस् ।’
नम्बर २ :
अर्को दिन ओलीले वार्डकी नर्सलाई अह्राए– डाक्टरहरुलाई बोलाउनुस् । नर्सले सोचिन्, ओलीलाई गाह्रो भयो । ढिलो नगरी उनले डाक्टरलाई खबर गरिन् । आइसियुमा राखिएको बिरामीले तुरुन्त डाक्टरलाई बोलाएको छ । त्यो पनि देशको प्रधानमन्त्री । खबर पाउनासाथ के भयो भन्दै डाक्टरको टिम नै हस्याङफस्याङ गर्दै आइपुग्यो ।
सबै डाक्टर र नर्सहरु भेला भएपछि ओलीले भने– अब यसो गरौं । हामी सबै दौडिउँ ।
अचम्ममा पर्दै डाक्टरहरुले सोधे– किन दौडिने प्रधानमन्त्री ज्यू ? के भयो र ?
ओलीले भने– तपाईंहरु पनि दौडनुस्, म पनि दौडन्छु । मैले हारेँ भने म राजीनामा दिन्छु । नत्र मलाई यहाँ थुनेर नराख्नुस् । मलाई केही भएको छैन । म बालुवाटार नै गएर आराम गर्छु ।
नम्बर ३ :
प्रधानमन्त्री बेडमा आराम गरिरहेका थिए । डाक्टर अरुण सायमी उनको छेउमा आएर सोधे– कस्तो छ प्रधानमन्त्री ज्यू ? कस्तो लागिरहेको छ तपाईंलाई ?
ओलीले जवाफ दिए– मलाई केही भएकै छैन, म त रंगशाला गएर एकपटक दौडिउँ कि जस्तो लागेको छ ।
प्रधानमन्त्रीका यी हास्यात्मक अभिव्यक्तिले उनी अस्पतालबाट छुटकारा पाउन कति आतुर थिए भन्ने स्पष्ट हुन्छ । उनलाई जतिसक्दो छिटो बालुवाटार फर्किनु थियो । उनले नै कर गरेपछि अस्पतालले बाध्य भएर उनलाई डिस्चार्ज ग¥यो ।
र डिस्चार्ज गर्दै गर्दा डाक्टर सायमीले ओलीलाई व्यंग्य गर्दै सोधे– अब दौडेर रंगशाला पुग्नुहुन्न नि फेरि ?
ओलीले मुसुक्क मुस्काएर जवाफ दिए– जान्नँ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रबार, मंसिर २०, २०७६, ०८:५६:००
लिन सकिएन ‘नेपाली स्याट-१’ बाट सूचना र जानकारी
जिल्ला अदालत माेरङका न्यायाधीशमा काेराेना संक्रमण
उपभोक्ता ठग्ने र म्याद नाघेका सामान बेच्ने भाटभटेनीका २ शाखा कारबाहीमा